Wasaaradda amniga oo ku raad joogta shaqsiyaad ka tirsan Shabaab – Radio Muqdisho
Wasaaradda amniga oo ku raad joogta shaqsiyaad ka tirsan Shabaab
Wasaaradda Amniga Qaranka ayaa sheegtay iney ku raad joogto shaqsiyaad ka tirsan kooxda Shabaab, kuwaasoo ka haray shabakado argagixiso oo ciidamada nabadgelyadu hor u bur buriyeen.
Afhayeenka wasaaradda amniga Maxamed Yuusuf Cismaan ayaa Radio Muqdisho u sheegay in ciidamada ammaanka ay baadi goob ugu jiraan shaqsiyaadka ka tirsan Shabaab ee ku howllan falal argagixiso oo ay ku dhibaateynayaan ummadda Soomaaliyeed.
“Wada shaqeynta ciidamada amniga oo kaashanaya shacabka ayaa keentay in xogag farabadan la helo, lana bur buriyo shabakado argagixiso, shar wadayaal kale oo ku dhuumaaleysanaya Muqdisho ayey ciidanku ku raad joogaan” ayuu yiri Afhayeenka wasaaradda amniga.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaa raaciyay in laamaha ammaanku ay u taaganyahay ka hortagga falalka liddiga ku ah amniga, wuxuuna hoosta ka xariiqay in ciidamadu ay adeegsadaan tabo casri ah oo looga hortago dhagarta ay maleegayaan maleeshiyaadka Alshabaab.
Hadalka afhayeenka ayaa imaanaya xilli ay ciidamada nabadsugidda iyo Booliisku ay kordhiyeen howlgallada ay ka wadaan xaafadaha Muqdisho, kuwaasoo lagu xaqiijinayo ammaanka caasimadda.
Maamulka iyo bulshada degmada Wadajir oo barlamanka ka dalbaday iney ansixiyaan xukuumadda